Umrepha waseMbali ukhiphe ingoma | News24
Umrepha waseMbali ukhiphe ingoma
ISITHOMBE: sithunyelweUmrepha waseMbali Unit 13 uLincoln Shelembe.
UMREPHA waseMbali Unit 13 uLincoln Shelembe, owaziwa ngo -KZN The Rapper emculweni, uthi uzimisele ukuthi akhule kule ndima njengoba esanda kukhipha ingoma yakhe esihloko sithi Ghetto Vibes nephume ngenyanga eyedlule.
Ngesikhathi ekhuluma ne-Echo, uShelembe uthe uthando lwakhe lomculo seluze lwamuphoqa ukuba ashiye ngisho emsebenzini alandele iphupho lakhe lokuba umculi.
Uthe uthando lwakhe lomculo walubona ngesikhathi esemncane, kodwa waze waqala ukuzibhalela izingoma ze-hip hop ngonyaka wezi-2005.
Uthe ingoma yakhe uzoyethula ngokusemthethweni emsakazweni womphakathi uMgungundlovu FM ngoMgqibelo mhla zili-15 kuMandulo (September) ohlelweni i-Marvelous Show phakathi kwehora leshumi nambili emini kanye nehora lesithathu ntambama (noon to 3 pm).
“Isimo engikhule ngaphansi kwaso isona besingekho lula ngakhula kanzima kanti isona esingikhuthazile ukuthi ngisukume ngilwele into engiyithandayo ngiveze nethalente lami kubantu ukuze babone ngizothola nokwesekwa.
Ngisebenzisa umculo ukwedlulisa izimo engikhule ngaphansi kwazo ngiphinde ngikhuthaze nabanye abantu ukuthi akumele balahlele ithawula emaphuphweni abo ngoba naku bethi kunzima lapho bephuma khona.
“Ngemuva kokuba ngiqalile ukuthi ngibhale izingoma uthando lwami lokuba umculo lwavele la khula ngenye indlela kodwa ngathi uma ngiqeda umatikuletsheni nganquma ukuba ngiwuyeke umculo ngoba ngithi ngifuna ukufunda bese ngiyasebenza kahle. Ngazama ngasebenza kodwa kwathi uma isikhathi siqhubeka ngezwa ukuthi akusiyona into engangifuna ukuyenza leyo ngabe sengiyashiya emsebenzini ngabuyela emculweni nokuyiyona into engi yiphusha kakhulu ke manje. Umculo uyimpilo yami yiwona ohamba phambili nengizibona nginekusasa eliqhakazile kuwona,” kubeka yena.
Uqhube wathi ngaphandle kwale ngoma yakhe asanda kuyikhipha kumanje umatasa usebenza i-EP yakhe nayo angahle ayikhiphe maduzane. Uthe isifiso sakhe ukuthi agcine esekwazile ukuthi akhiphe i-album esikhathini esizayo. Ngaphandle kokuba umculi uShelembe uphinde abe ngumlingisi . Uphinde abe ngomunye wabaculi abazobe benandisa emcimbini wozime uMiss Cultural Umgungundlovu ngoMgqibelo mhla ziyi-6 kuMandulo eMgungundlovu TVET College.